I-NVIDIA inomshayeli omusha weLinux | Kusuka kuLinux
Isiginesha INVIDIA ikhiphe umshayeli omusha noma umshayeli weLinux ofaka ukuthuthuka okuthokozisayo kunhlobo yangaphambilini, into abalandeli be-American brand of GPUs abazoyithokozela. Lo mshayeli omusha, phakathi kwezinye izinto, ugqama ngokuba nokwesekwa kwabaqaphi okuhambisana nobuchwepheshe be-G-SYNC. Lokho wukuthi, ngokusekelwa kwabaqaphi bemidlalo ukuthi ngenxa yayo kungabonisa izinto ngokushesha okucacayo.
Kuyinto a Isilawuli se-beta Futhi kulokho esikwazile kubonakala kubukeka kujabulisa, ikakhulukazi uma ucabangela lelo zwe elichumayo lokudlala kuLinux, ungeza ukuxhaswa kwalobu buchwepheshe obuzobakhanga nakanjani abadlali beLinux abaningi. Ngakho-ke, ngalo mshayeli omusha, bonke abasebenzisi abanesibuko seFreeSync kufanele bakwazi ukusebenzisa i-G-SYNC ngaphandle kwezinkinga.
Kepha njengoba sifundile, lesi silawuli sisazopholishwa ngabathuthukisi, njengoba sinabanye ukulinganiselwa ngaphezu kokuba yiBeta. Isibonelo, i-G-SYNC izosebenza kuphela nge-monitor futhi uma umdlalo uboniswa kusikrini esigcwele. Lokhu kucasule abanye abadlali bamageyimu, abathi kuyihlazo ngoba akusizi ngalutho lapho ama-gamers amaningi esebenzisa imonitha engaphezu kweyodwa ...
Nokho, igxathu negxathu liyathuthuka futhi bathuthele nakwezinye izingqinamba, njengokuthuthuka ekusekeleni iVulkan ne-OpenGL, ukuxazululwa kwezinkinga ezithile ezivimbele ukukhetha izikrini ze-PRIME esikhungweni sokumisa se-NVIDIA, izimbungulu ezine-Vulkan ezidale ukungasebenzi, kungezwe ukusekelwa kwevidiyo ICodec SDK 9.0, nokuxhaswa kweTuring NVENC / NVDEC, njll.
Usuyazi vele ukuthi zikhona abalawuli abavulekile nabanobunikazi yamakhadi emidwebo, uma ufuna ukwazi kabanzi ngabanikazi ongachofoza kubo lesi sixhumanisi esivela kuwebhusayithi esemthethweni ye-NVIDIA.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-NVIDIA inomshayeli omusha we-Linux
U-Andreale Dicam kusho
"Usuyazi vele ukuthi kunabashayeli abavulekile ..." ngiyacela, esihlokweni seNvidia labo bashayeli bamaNouveau bamahloni bangempela. Lapha kuthinta uma noma ngabe abanikazi.
I-OPNsense 19.1 i-firewall yomthombo ovulekile kanye nesistimu yomzila